Kaydka qashinka cuntada - Xarunta EcoTechnology
Yareynta Qashinka Cuntada ee New Jersey: Istaraatiijiyadaha looga Hortagayo, Ku -deeqo, iyo Qashinka Meel -marinta
Ma ogtahay in ilaa 40% cuntada la beero oo la soo geliyo Maraykanka la khasaariyo? Tani waxay u tahay fursad ganacsatada iyo hay'adaha inay hirgeliyaan hababka maareynta cuntada ee la khasaariyey oo lacag badbaadiya, ka faa'iideeya bulshada, dhisaan daacadnimada macmiilka, iyo hagaajinta bay'ada. Iyada oo Sharciga Qashinka Cuntada ee New Jersey uu dhaqangelayo Oktoobar, ganacsiyada ayaa jira
CET waxay u aqoonsan tahay EPA soo kabashada qashinka cuntada
By Emily Susan Gaylord|2020-04-27T11:44:46-04:00April 27th, 2020|Ku-deeqidda Cunnada, Qashinka cuntada, Press Release, Uncategorized, Weecinta Qashinka|
Waxaan ku faraxsanahay inaan la wadaagno in US EPA ay abaalmarin siineyso toddobo urur oo maxalli ah New England iyada oo lagu aqoonsanayo shaqadooda ay ka ilaalinayaan cunnada qashinka ka baxsan meelaha qashinka lagu rido iyo in la galiyo si ka sii wanaagsan loo isticmaalo, anaguna waxaan ka mid nahay! Abaalmarinnadu waxay qayb ka yihiin Tartanka Soo-kabashada Cuntada ee EPA (FRC). Waqtiyada adag sida kuwan oo kale,